ဘိုးဘေးဘီဘင်ပစ္စည်းတွေကို အမြဲသိမ်းထားသင့်လဲဆိုတာ သက်သေပြနေတဲ့ ဓာတ်ပုံများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingဘိုးဘေးဘီဘင်ပစ္စည်းတွေကို အမြဲသိမ်းထားသင့်လဲဆိုတာ သက်သေပြနေတဲ့ ဓာတ်ပုံများ
July 9, 2020 Yan Amazing 0
ရှေးတုန်းက ပစ္စည်းတွေကို ယနေ့အချိန်အထိ အမှတ်တရ သုံးနေကြသူများ
မြန်မာတွေရဲ့ ဆိုရိုးစကားတွေထဲမှာ လူကြီးတွေပြောတဲ့ စကားလေး တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဘာစကားပုံလဲဆိုတော့ “ ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ (၆) နှစ်ကြာရင် အသုံးတည့်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ” တစ်ကယ်လည်း ဒီစကားဟာ မှန်နေပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ပစ္စည်းတွေကို မလိုအပ်လို့ လွှတ်ပစ်လိုက်ပြီးမှ တစ်ချိန်အသုံးလိုလို့ ပြန်ရှာတဲ့အခါ တော်တော်လေးကို အခက်တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုတစ်ခေါက်မှာ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ရှေးတုန်းက ပစ္စည်းတွေကို ယခုအချိန်အထိ အသုံးတည့်စွာ သုံးနေကြသူတွေရဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ပစ္စည်းတွေလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
၁။ နှစ် ( ၁၀၀ ) ကျော် သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ မီးလင်းဖို
အခုမြင်နေရတဲ့ မီးလင်းဖိုဟာဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ( ၁၃၀ ) သက်တမ်းလောက်ရှိနေပါပြီ။ ပုံစံက ရှေးကျသွားပေမယ့် ထိန်းသိမ်းတဲ့သူ တော်တာကြောင့် ယနေ့အချိန်အထိ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုလို့ ရနေသေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၂။ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တည်းက ဝယ်ခဲ့တဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား
အမျိူးသားတစ်ယောက်ရဲ့ အဖိုးဖြစ်သူဟာ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တုန်းက DE razor အမည်ရှိတဲ့ ရွှေရောင် မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား တစ်ခုကို ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၅ နှစ်ကြာပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ အမျိုးသားဟာ သူ့အဖိုးရဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားကိုပဲ တရိုတသေသုံးခဲ့ပြီး ဒီနေ့အချိန်အထိ သုံးနေဆဲလို့ Social Media မှာ ပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၃။ အဖွားဖြစ်သူရဲ့ ပေါင်မုန့်မီးကင်စက်
ဒီပေါင်မုန့်မီးကင်စက်ကို အဘွားတစ်ယောက်ဟာ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တုန်းက ဝယ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပစ္စည်းအရည်အသွေးကောင်းလွန်းတာကြောင့် ဒီအဘွားဖြစ်သူရဲ့ မြေးတွေလက်ထက်အထိ မပျက်ပဲ အသုံးပြုလို့ရနေသေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၄။ နှစ်အတော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ရှေးဟောင်းနာရီ
အခုမြင်နေရတဲ့ Omega တံဆိပ်နာရီဟာဆိုရင် နှစ်အတော်ကြာနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာရီရဲ့ မူလပိုင်ရှင် အဘိုးဖြစ်သူဟာ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တုန်းက ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့မြေး လက်ထက်အထိ သပ်ရပ်တောက်ပြောင်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၅။ နှစ် ( ၈၀ ) သက်တမ်းရှိတဲ့ မော်တော်ကား
ဒီပုံထဲက အဘိုးရဲ့ နာမည်ကတော့ Mr. Allen Swift ဖြစ်ပြီး အသက် ( ၁၀၂ ) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဘိုးတစ်ဦးပါ။ အသက် ( ၁၀၀ ) ကျော်ပေမယ့်လည်း ယနေ့အချိန်အထိ ကားမောင်းနိုင်ဆဲဖြစ်ပြီး သူစီးတဲ့ ကားဟာဆိုရင် ၁၉၂၈ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Rolls-Royce Piccadilly P1 Roadster အမည်ရှိ ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနှစ် (၈၀ ) ကျော်လုံးလုံး ဒီကားတစ်မျိုးတည်းကို စီးလာခဲ့တာ တစ်ကယ့်ကို အံ့ဩစရာပါ။ shwekhitonlinetv.com
၆။ ( ၆၁) နှစ်ကျော် ကြာသွားတာတောင် မပျက်သေးတဲ့ ကင်မရာ
အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ 1957 model Leica M3 ကင်မရာလေး တစ်ခုကို ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ( ၆၁ ) နှစ်ကြာတဲ့တိုင်အောင် ဘာမှမပျက်စီးပဲ အကောင်းအတိုင်းရှိနေသေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ခေတ်က ပစ္စည်းတွေက ကွာလတီတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတာ လက်ခံရမှာပါ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာတွေကတော့ နှစ်အတော်ကြာတုန်းက ဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေအကြောင်းကို အမှတ်တရအဖြစ် စုစည်းဖော်ပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလို အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
ရုတ်တရက်ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေကို အမိအရ မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်နိုင်တဲ့ ပုံများ
သင့်ကို မျက်လုံးပြူးသွားစေမယ့် ထူးဆန်းတဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက် (၇) ချက်